Fanamboarana bobongolo, koron-tsindrona tsindrona, koronosy plastika - Mestech
Famolavolana bobongolo sy famolahana tsindrona
MESTECH dia manana rafitra famokarana lasitra plastika tanteraka.
Firaka metaly tsara sy faritra azo antoka tsara azo raisina.
Vokatra vaovao hatrany am-piandohan'ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana sy marketing.
Misy vokatra an'arivony eny an-tsena, izay havaozina isan'andro isan'andro.
Ny ampahany plastika dia vita amin'ny alàlan'ny famolavolana bobongolo miaraka amin'ny fomba fanodinana hafa, izay ny habe sy ny asany dia mifanaraka amin'ny takian'ny mpamorona. Maherin'ny 80% amin'ireo faritra plastika novolavolain'ny famolavolana tsindrona, izay no fomba lehibe ahazoana ampahany amin'ny plastika. Ny sombin-tsolika sy ny vokatra vita amin'ny tsindrona dia niditra an-tsokosoko tamin'ny lafiny rehetra amin'ny maha-olombelona ...
Mba hahombiazana amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana vokatra plastika dia tsy maintsy fantatsika ny karazany sy ny fampiasana plastika. Ny plastika dia karazana fitambaran'ny molekiola avo (macrolecules) izay namboarina tamin'ny alàlan'ny fanamafisana polymerisation na fanehoan-kevitra polycondension miaraka amin'ny monomer ho akora. Betsaka ny karazana plastika misy fananana samihafa, saingy mora ny maivana amin'ny lanjany, ...
Ny boaty fitsaboana plastika (antsoina koa hoe boaty fitsaboana) na boaty fitsaboana plastika, dia be mpampiasa any amin'ny hopitaly sy ny fianakaviana. Ny azo ampiasaina amin'ny fitehirizana zava-mahadomelina, fitaovana ara-pahasalamana na hitondrana azy ireo hahitana marary. Ny boaty fitsaboana, araka ny anarany, dia fitoeran'ny fitehirizana fanafody sy fitaovam-pitsaboana, izay azo avoaka ary ampiasaina raha situat ...
Miaraka amin'ny fivoaran'ny indostria maoderina dia mihamaro hatrany ireo fitaovana plastika tena tsara. Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra plastika koa dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany. Indrindra fa ny ampahany plastika marimarina kokoa no ampiasaina. Andao hizara aminao ny torohevitra momba ny famolavolana sy ny famolavolana ny plastika. Fanasokajiana ny ampahany plastika marina: 1. Famolavolana pr ...